कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्षदेखि सामान्य तहसम्मका नेता वा कार्यकर्ताले आफ्नो जन्मदिन कसरी मनाउने ? सामान्य तरिकाले वा भव्य रूपले ? केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनमा देखिएको भव्यताले यस्ता प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ६९औं जन्मदिन आफ्नै जन्मथलो तेह्रथुमको आठराईमा मनाउँदा देखिएको भव्यतालाई लिएर अहिले अनेक टीका–टिप्पणी उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनका लागि तयार पारिएको नेपालको नक्सांकित केकलाई लिएर पनि अनेक प्रश्न उठाइएका छन् । प्रश्न सोध्नेहरू सोधिरहेका छन्– नेपालको नक्सांकित केक बनाउनु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? साथै, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले भव्य रूपमा जन्मदिन मनाउनु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? निश्चय नै यो प्रकरणले तातो बहस निम्त्याएको छ र आलोचनाको पात्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याउने कार्य भएको छ ।
आफ्नो जन्मदिन मनाउने वा नमनाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रश्न हो । कुनै व्यक्तिले भव्य रूपमा निकै खर्चिलो तरिकाले आफ्नो जन्मदिन मनाउने गर्छन् भने कुनैले सामान्य तरिकाले । कुनै–कुनैले त जन्मदिन मनाउन आवश्यकसमेत ठान्दैनन् पनि । यी सबै व्यक्ति–व्यक्तिपिच्छेका रुचिका कुरा हुन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीले भव्य तरिकाले जन्मदिन मनाउँदा भने त्यो चर्चा÷परिचर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यो स्वाभाविकै हो । अझ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जन्मदिन, वैवाहिक समारोहलगायत सांस्कृतिक पर्व र उत्सवहरु भड्किलो तरिकाले नभई सामान्य तरिकाले मनाउनुपर्ने उर्दी (आचारसंहिता) केही समयपूर्व सार्वजनिक गरेको हुँदा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको भव्य जन्मोत्सवलाई लिएर टिप्पणी भएकोमा दुईमत देखिँदैन । आचारसंहिता सामान्य तहका नेता÷कार्यकर्ताका निम्ति मात्र हो कि शीर्ष नेतृत्वलाई समेत लागु हुने हो ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अझ, सार्वजनिक चिनारी भएका व्यक्तिले भव्य रूपमा जन्मदिन मनाउँदा त्यसले सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा रहेको विदितै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिन मनाउन पाउनु उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र इच्छाको विषय हो । उनले आफ्नो निवासमा सीमित आफन्त र शुभेच्छुकहरुलाई निम्त्याएर जन्मदिन मनाउन पाउँछन् । नपाउने भन्ने सवालै रहेन । तर, प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक थलोमा भव्य रूपमा जन्मदिन मनाउँदा भने अहिले त्यो टिप्पणीको विषय बन्न पुग्यो । फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जन्मदिन यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा मनाएका छन्, सरकार र कतिपय मन्त्रीहरूका आचरण र कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी प्रहार भइरहेका छन्, व्यापक प्रश्नचिह्न उठिरहेका छन् । मूलतः निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरणले सरकारलाई केही हदसम्म गलाएको अवस्था छ । यस्ता सवालहरूले सरकारमाथि प्रश्नचिह्न ठडिएका हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको तामझाममय जन्मदिन मनाइनुले कुरा काट्नेहरुलाई थप मसला बन्न पुगेको विदितै छ ।
पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूमा देखिँदै गएको नैतिक विचलन र संकट, गलत आचरण र कार्यशैलीलाई लिएर सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेका छन् । यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । अझ ‘कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुगेपछि बिग्रिन्छन्’ भन्ने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको प्रचारबाजीलाई पछिल्ला प्रकरणहरूले अझै मलजल गर्न सघाउ पु¥याउँदै आएको देखिन्छ । कमिसन प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री मुछिनु, प्रधानमन्त्रीले भड्किलो तरिकाले जन्मदिन मनाउनु र सुशासनका सवालमा सरकार दिनप्रतिदिन चुक्दै जानुले विरोधी खेमाका हल्ला र अनावश्यक प्रचारबाजीले सार्थकता पाउन थालेको आभास हुँदै गइरहेको छ । यस्ता अनावश्यक प्रचारबाजीलाई चिर्नतिर सत्तारूढ नेकपा र सरकारको प्रयत्न झिनो साबित हुँदै गएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितेको छ । तर, दुई वर्षसम्म पनि सरकार चुकेको विषय हो– सुशासन कायम गर्न नसक्नु । सरकारले अरू विषयहरुजस्तै सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आए पनि यो विषयमा सर्वथा चुक्दै गएको देखिन्छ । सुशासन कायम राख्न नसक्दा नै भ्रष्टाचार, आर्थिक बेथिति र विसंगति, नैतिक संकटजस्ता विषयहरू मौलाउँदै गएका छन् । र, दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचाररूपी ऐंजेरुहरू झाँगिदै गएका छन् । अतः कामना गरौं, भ्रष्टाचाररूपी ऐंजेरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई नबेरोस्, आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्नेतिर अथाह सफलता मिलोस् ।